अाइपीएलमा सन्दीपको सानदार प्रदर्शन ४ ओभर १ विकेट २१ रन - देश विकास डटकम
अाइपीएलमा सन्दीपको सानदार प्रदर्शन ४ ओभर १ विकेट २१ रन
काठमाडौं, ५ जेठ । इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपिएल) अन्तर्गत शुक्रबार नेपाली युवा सन्दीप लामिछानेले आफ्नो चार ओभर बलिङमा १ विकेट लिएर २१ रन खर्चिएका छन्।
दिल्ली डेयर डेभिल्सबाट खेलिरहेका लामिछानेले महेन्द्रसिंह धोनीको टिम चेन्नेई सुपर किंग्सविरूद्ध उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै ५.२५ इकोनोमीमा बलिङ गरेका हुन्।
यसअघि बैंग्लोरविरुद्ध डेब्यू खेलमा सन्दीपले ४ ओभरको स्पेलमा २५ रन खर्चेर १ विकेट लिएका थिए।
दोस्रो ओभरमै बलिङ गर्न आएका सन्दिपले आफ्नो पहिलो ओभरमा मात्र दुई रन खर्चिए। यस ओभरमा अस्ट्रेलियन शेन वाट्सनले सन्दीपका सबै बल खेले। दोस्रो बलमा २ रन लिनबाहेक उनले अन्य बलमा एक रन लिन सकेनन्।
त्यसपछि आफ्नो दोस्रो ओभरमा सन्दिपले ६ रन खर्चिए।
भारतीय राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान महेन्द्रसिंह धोनी र सुरेश रैनाविरुद्ध पनि सन्दीपले उत्कृष्ट बलिङ गरेका छन्। टिमको ११औं ओभरमा आफ्नो दोस्रो ओभर फाल्न आएका सन्दीपले ६ रनमात्रै खर्चिए। धोनी र रैना तीन-तीन रन सिंगल दौडिएका थिए।
सन्दीपले आफ्नो तेस्रो ओभरको पहिलो बलमा सुरेश रैनाको विकेट लिदैं ऐतिहासिक सफलता हात पारे। १५ रन बनाएर खेलिरहेका रैनालाई सन्दीपले विजय शंकरको हातबाट क्याच गराए।
आइपीएलमा यो सन्दीपको दोस्रो खेलमा दोस्रो विकेट हो। यसअघि डेब्यू खेलमा सन्दीपले बैंग्लोरका पार्थिव पटेलको विकेट लिएका थिए।
आएका सन्दीपले २ रनमात्रै खर्चिएर १ विकेट हात पारेको ओभरको पहिलो बलमा विकेट लिए भने दोस्रो बलमा बिलिङ्सले १ रन लिए। तेस्रो बलमा धोनीले एक लिएर बिलिङ्सलाई स्ट्राइक दिए। तर बिलिङ्सले रन लिन सकेनन्। पाचौ बल पनि डट खेलेका उनले छैठौं बलमा एक लिएका थिए।
यस्तै सन्दिपले आफ्नो चौथो तथा अन्तिम ओभरमा १ छक्कासहित ११ रन खर्चिए। पहिलो बलमा रविन्द्र जडेजाले छक्का प्रहार गरेका थिए भने दोस्रो बलमा २ रन लिएका थिए। तेस्रो बलमा एक रन लिएर धोनीलाई स्ट्राइक छोडेका थिए। धोनीले चौथो बलमा एक रन लिए। पाँचौ बलमा जडेजाले १ रन लिए भने अन्तिम बलमा धोनीले रन लिन सकेनन्।
सन्दीप लामिछानेले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि अाइपीएलमा दिल्ली डेयरडेभिल्सले चेन्नर्इ सुपरकिंग्सलार्इ ३४ रनले पराजित गर्दै चौथो जित हात पारेको छ। पहिले ब्याटिङ गर्दै दिल्लीले दिएको १ सय ६३ रनको लक्ष्य पछ्याएको चेन्नइ निर्धारित २० अोभरमा ६ विकेट गुमाएर १ सय २८ रनमा समेटिएको थियो।
अाफ्नो टोलीलार्इ जिताउन महत्वपूर्ण भुमिका खेलेपछि स्टाइलिस प्लेयर भएका सन्दीपले आफूले सकेसम्म राम्रो प्रयास गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। विकेट हल्का स्किडी (चिप्लो खालको) रहेको भन्दै उनले सवै खेलाडीहरुको योगदानबाट जित सम्भव भएको बताए। ‘मैले अाफ्नो उत्कृष्ट बल फाल्ने प्रयास गरेको हुँ। जति पनि नेपाली समर्थकहरुले म र टिमलार्इ सपोर्ट गरिदिनु भयो। सवैलार्इ धन्यवाद भन्न चाहान्छु,’ उनले भने।
← मोटरसाईकललाई २ सय रुपैयाँ प्रदुषण कर
डिआइजी सरुवा, को कहाँ पुगे ? →
वरिष्ठ रचनाकार सुवासचन्द्र ढुंगेलको एकल मुक्तक वाचन, हलमा बजिरह्यो तालि (फोटो फिचर)
१९ जेष्ठ २०७५, शनिबार १०:०२ Deepa Poudel 0
पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत मुग्लिन सडकखण्ड जेठ १६ गते १४ दिनसम्म बन्द हुने
१६ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०८:२७ Saroj Poudel 0
यातायात समितिको नाममा रहेकाे सम्पत्ती समेत वेच्दै व्यावसायी
१० बैशाख २०७५, सोमबार ०७:१३ Saroj Poudel 0
कोरोना संक्रमित १ लाख नाघेपछि जनस्वास्थ्यविद् डा. पाण्डेको १० सुझावहरु
स्थानीय तहमा बेथिति : आठवटा रूख काट्न ६ लाख खर्च, तालिममा सहभागी ५४, देखाइयो एक हजार
धादिङ थाक्रेमा ट्रिफर र बस ठोक्किँदा एक जनाको ज्यान गयो !
यस वर्षको तिहारमा खुल्छ रानीपोखरी
अण्डा उत्पादनमा ४० प्रतिशत गिरावट
बेलायतको कूल गार्हस्थ उत्पादन अगस्टमा पनि वृद्धि, अझै महामारीपूर्वको तहमा पुग्न सकेन
गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित ११ जनालाई कोरोना
मदनको कोरोना रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’ आएपछि हरिवंशको यस्तो प्रतिक्रिया
Copyright © 2020 देश विकास डटकम. All rights reserved.